Shariif Xasan oo wariye caan u magacaabay afahayeenka maamulka Koonfur Galbeed – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, Shariif Xasan Sheekh Aadam ayaa afahayeenkiisa u magacaabay wariye C/qaadir Cashir Nadaara oo muddo kasoo dhaqeeyey warbaahinta Afka Soomaaliga ku hadasha.
Wariye Cabduqaadir Cashar Nadaara ayaa shalay oo taariikhdu aheed 1-bisha Maarso waxaa si rasmi ah loogu magacaabay in uu noqdo Afhayeenka madaxweyne Shariif Xasan, ahna la-taliyaha dhanka warfaafinta, sida ku cad wareegto kasoo baxday xafiiska Shariif Xasan Sheekh Aadam.
Nadaara ayaa horay uga soo shaqeyey Idaacaddii Horn Afrik ee Muqdisho iyo TV-yada Universal iyo Kalsan ee fadhigoodu yahay UK.
Halkaan ka aqri wareegatada Shariif Xasan ku magacaabay Nadaara. Riix sawirka waqradda si uu u weynaado.
Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray Guriceel